आज पनि बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य ! यस्तो छ बजार भाउ – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/आज पनि बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य ! यस्तो छ बजार भाउ
आज पनि बढ्यो सुन चाँदीको मूल्य ! यस्तो छ बजार भाउ
सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य ५०० रुपैयाले बढेको छ । आइतबार प्रतितोला ७५ हजार ५ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाला सुनको मूल्य आज बढेर प्रतितोला ७६ हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ७५ हजार ७ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा ५ रुपैयाँले बढेको छ । आज चाँदीको मूल्य बढेर प्रतितोला ८ सय ९५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
गायिका आस्था राउतलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा राउतवि’रुद्ध पक्राउ अनुमति जारी भएपछि उनी परिवारसँग प्रहरीको सम्पर्कमा आएकै बेला पक्राउ परेकी छन् । आस्था राउतलाई आफन्तले महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा आज बिहान लगेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
नेपाल आए लगत्तै पक्राउ गर्ने तयारी गरेपछि आस्थाकाे परिवार उनलाई नेपाल फर्किए लगत्तै प्रहरी कार्यालयमा हाजिर गराउन सहमत भएकाे थियाे। उनी बि’रुद्द अभद्र व्यवहार सम्बन्धी क’सुरमा मुद्’दा चल्ने छ। प्रहरीले उनी आफै प्रहरी कार्यालयमा आएको खन्डमा लचिलो बन्ने संकेत दिएको थियो। आस्था राउतलाई प्रहरीले बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पक्राउ गर्न अनुमति दिएको थियो ।
आस्थाले विमानस्थलमा आफूमाथि दु’र्व्यवहार भएकाे माघ १ मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लाइभ गरेकी थिइन्। विमानस्थलमा जाँच गर्दाको सिसिटिभी भिडियो बाहिरिए थियाे। भिडियाे बाहिरिएपछि आस्थाले फेसबुकमार्फत नै लाइभमा आफ्नो बचाउ गरेकी थिइन्। पछि आस्थाले आफूले बोलेका कतिपय शब्दहरूले प्रहरी सं’गठनलाई चो’ट पुगेको भन्दै फेसबुक लाइभबाट माफ पनि मागेकी थिइन्।
आज कृष्ण अष्टमी, भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधनागरी देशभर मनाइदै
विराटनगर विमानस्थलबाट पनि हवाइ उडान सुरु
श्रीमान लिए गर्भवती श्रीमतीको ज्यान